Mba UNWTO chọrọ nnapụta na Saudi Arabia ji ọtụtụ ijeri zaghachi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Mba UNWTO chọrọ nnapụta na Saudi Arabia ji ọtụtụ ijeri zaghachi
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Oku mberede maka njem
911, kedu ihe bụ ọnọdụ mberede gị? Saudi Arabia ji ọtụtụ ijeri dollar na -aza nsogbu ọgba aghara ụwa. Otu mba na -eme ihe karịrị ikwu okwu, ọ na -emefu nnukwu ego iji zọpụta njem njem na njem njem ụwa - nke a abụghịkwa ọrụ izi ozi mbụ.
"Anyị na -eme akụkọ ihe mere eme taa!" Nke a bụ akụkọ kpakpando na -enwu enwu na ụlọ ọrụ njem na njem eTurboNews bipụtara na October 6 afọ gara aga.
Kpakpando ahụ bụ nwanyị kacha nwee mmetụta na njem njem n'oge ahụ, Gloria Guevara. N'oge ahụ ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ World njem na njem nleta Council (WTTC). Ọ maghịdị onye na -akwagharị na onye na -emegharị ụlọ ọrụ a n'ogo nke ngalaba a na ụwa ahụbeghị na ọ nwere ike bụrụ taa.
Taa Center nke njem na njem njem na -ezukọta n'otu ebe: Riyadh, Saudi Arabia. Nke a nwere ike ịgụnye mbugharị mbụ nke UNWTO (World Tourism Organisation) ịkwaga isi ụlọ ọrụ ya na Spain gaa Saudi Arabia.
Ọdịnihu na mgbake nke otu nnukwu ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nwere ike ịdị n'aka mba amara, Alaeze Saudi Arabia.
Onye ndu nwere ọhụụ 2030 n'azụ ihe a niile, ọ bụrụ na ọ ga -aga nke ọma, ga -abụ Mịnịsta njem nlegharị anya maka Saudi Arabia, Hon. Ahmed Al-Khateeb. Nwanyị na-emezigharị njem nlegharị anya ụwa nwere ike ịbụ onye bụbu onye isi oche nke WTTC, Gloria Guevara si Mexico, onye na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye ndụmọdụ kacha elu na otu onye ozi ahụ, Ahmed Al-Khateeb.
G20 nwekwara ike bụrụ ụbọchị Gloria Guevara nwetara ọrụ, ọ nweghị ike jụ. Ihe kpatara na ọ nweghị ike jụ nwere ike ọ bụghị naanị ụgwọ ọnwa ahụike nke Saudi Arabia nwere ike ịkwụ ya mana nkwụsi ike ya na ịmalitegharị njem na njem nlegharị anya n'ụwa.
N'eziokwu, Saudi Arabia na-emefu ihe ruru ijeri dọla US 500 iji wuo ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa na obodo nke ya, kamakwa n'inyere aka na itinye ego na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ego na-agwụ ike n'ọtụtụ mba iji hapụ ụlọ ọrụ a, Saudi Arabia bara ọgaranya na-ahụ ntinye ego ya na njem nlegharị anya ọ bụghị naanị dị ka ohere mmeri/mmeri kama dịka ntinye aka na ụwa.
N'ọnwa Mee 2021 WTTC n'okpuru onye ndu Gloria Guevara nwere ihe ịga nke ọma na nzukọ ọgbakọ mba ụwa mbụ nke ndị isi njem nlegharị anya ga -ezukọ na Cancun, Mexico.
Ebumnuche ya dị ka onye isi oche nke WTTC, nzukọ nwere ụlọ ọrụ kacha ukwuu na njem na njem nlegharị anya dịka ndị otu, bụ ịchekwa ụlọ ọrụ onwe. Guevara na -achọ nhazi mba ofesi. Nzaghachi sitere na Saudi Arabia juputara na ọkpụkpọ òkù ịga G20. Nke a bụ mbụ a kpọrọ ndị nwere onwe ha oku.
Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ nkeonwe chọrọ, mmekorita nke ọha na nkeonwe yana ndị nwere ike ime mgbanwe.
Mgbakọ mba ụwa mbụ na njem nlegharị anya kemgbe ntiwapụ nke COVID-19 mere. Ebe mgbakọ ahụ bụ obodo ntụrụndụ Cancun na Mexico. Gloria Guevara dị mpako, onye nwere ọkwa onye odeakwụkwọ njem nlegharị anya maka Mexico site na Machị 10, 2010, ruo Nọvemba 30, 2012, kwubiri nzukọ nkwukọrịta a na -aga nke ọma na olileanya maka ụwa nke ndị njem.
Onye na-anọghị na Mexico, bụ onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili.
Agbanyeghị, Zurab anọghị na Saudi Arabia. Ọ bụ ezie na ọkwa ọkwa ya bụ na ya enweghị nsogbu na mba ndị ọbịa UNWTO bụ Spain, UNWTO emepelarị ọfịs mpaghara na Saudi Arabia.
Dabere na akụkọ mgbasa ozi Spanish, ndị nnọchi anya na Spain na Saudi Arabia na -arụsi ọrụ ike n'azụ ihe nkiri ahụ.
Ọtụtụ ndị otu UNWTO, ọkachasị ndị otu UNWTO ndị na-esoghị na kọmitii na-ahụ maka njikọ nke UN na-enwe mmetụta na UNWTO gbahapụrụ ya kemgbe Zurab were ọkwa. UNWTO enweghị ndị mmadụ, ego na akụrụngwa ebe iji mee nnukwu mgbanwe maka ndị otu ya na -akwụ ụgwọ. Ndị otu na -echekarị na ọ bụghị naanị na a gbahapụrụ ha kama ha na -ebi akwụkwọ. Ndị otu na UNWTO adịghị ọnụ ala, ọkachasị mgbe ụlọ ọrụ ahụ na -enwe nsogbu kachasị njọ.
Ihe ndị a niile nwere ike bịa na njedebe ma ọ bụrụ na enwere ike ịkwaga UNWTO HQ na Saudi Arabia, a ga -amanye ya ịrụ ọrụ ọzọ na otu ndị ọzọ, dị ka WTTC. Ihe odide ahụ adịla na mgbidi. UNWTO na WTTC emepelarị ọfịs mpaghara na Riyadh. Ekwuputara nke a na G20. Saudi Arabia dị njikere ịnapụta na ịlaghachimalite njem. Ndị otu ndị ọzọ na -aga n'ihu, ọtụtụ na -eche echiche inwe ụkwụ na Saudi Arabia.
N'ihu ọha, Spain agbachila nkịtị ruo ugbu a, mana dịka isi mmalite siri ike na Madrid si kwuo, Spain na -ewe iwe. Mgbe akpọtụrụ ya eTurboNews, ozi njem na Madrid azaghị ya.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara na Madrid si kwuo, ndị isi nọ na Spain tụrụ aro ka a rụzigharịa ụlọ ọrụ UNWTO dị ugbu a iji mejupụta adịghị ike dị ka onye ọbịa na-adịgide adịgide.
Nke a nwere ike ịbịa n'oge, ebe ọ bụ na mba na -akụ aka n'ọnụ ụzọ Saudi Arabia iji kwado ịkwaga UNWTO HQ na Alaeze ahụ.
Agụụ na -agụ mba ọ bụla maka itinye ego na ego ma a bịa n'ihe banyere njem, Saudi Arabia azabeghịkwa ọtụtụ oku mberede.
Kpakpando na-emeri ihe nrite na WTTC Summit na Cancun bụ, enweghị mgbagha, onye minista njem na Saudi Arabia. Ọtụtụ ndị nnọchiteanya kwuru eTurboNews isi ihe mere ha ji aga nzukọ a bụ izute ndị nnọchi anya Saudi Arabia. Ego ekwuola na Cancun ma na -ekwu ugbu a.
Onye ozi sitere na Saudi Arabia nwetara ụgwọ ọrụ na nkwanye ugwu na Cancun mgbe onye isi oche WTTC Gloria Guevara mepere ụzọ maka ihe anyị na -ahụ taa.
Enwere ọtụtụ ihe ime, tebe a bụ ọtụtụ ikpe na -ezighị ezi na ihe ịma aka eTurboNews kọrọ site na nzuko ahụ.
A ga -enwe ihe ọhụrụ echi maka njem njem buru amụma eTurboNews onye nkwusa Juergen Steinmetz ihe dị ka otu ọnwa gara aga. Ọhụrụ a echi ma ọ bụ ụfọdụ na -ekwu na ọ nwere ike malitela. Ọ dị ka Saudi Arabia na -apụta dị ka onye echiche na onye ndu doro anya.
Enwere ọtụtụ ndị na -ekwu okwu n'ụwa nke njem. Ha gụnyere ndị isi, ndị ozi, na ndị isi otu. Obodo ọ bụla nwere otu nsogbu jikọrọ ọnụ: Nsogbu a bụ na enweghị ngwọta ọ bụla, enweghị ego ọbụladị kwurịtara ihe ngwọta dị. Onweghi onye ma otu esi azọpụta njem na njem na nde kwuru nde ndị ọrụ.
Mụ na enyi m nọ na Riyadh, nrọ nwere ike mezuo nke ọma. Ha nwere ike ịdị ọnụ, mana enwere azịza, Saudi Arabia na -aza oku 911 (112) dị ka enyi na mba nke yiri ka ọ na -eche maka ụlọ ọrụ a, ndị na -arụ ọrụ na mpaghara a, na mba ndị ọzọ nọ n'ọnọdụ ọjọọ. .
E kwuwerị, ọ bụ ezie na njem njem abụghị ihe ọhụrụ nye Saudi Arabia, imepe njem nlegharị anya ọdịda anyanwụ na alaeze bụ ihe ọhụrụ, na inyere ụwa ndị ọzọ aka nwere ike bụrụ okwu ọdịbendị, kamakwa ohere azụmaahịa n'ime ogologo oge maka ala -eze.
Hon. Edmund Bartlett na HE Ahmed Al Khateeb ga -ezukọ na nnọkọ mgbake njem nlegharị anya nke Africa
Ebee ka anyị kwụ ugbu a?
N'ilele ọkwa ọkwa, naanị ndị ozi ole na ole na -agbalị ime mgbanwe. N'ime ha bụ n'ezie Hon. Edmund Bartlett si Jamaica.
Bartlett na Al-Khateeb bịanyere aka n'akwụkwọ nke intend n'oge na -adịbeghị anya, ha abụọ yi okpu Bob Marley. Mgbasa ozi mba ụwa nke Bartlett gbanwere n'ụzọ doro anya na Saudi Arabia.
G20 nwekwara ike bụrụ ụbọchị Gloria Guevara nwetara ọrụ site na Saudi Arabia, ọ nweghị ike jụ. Ọ bụkwa emume a mgbe Saudi Arabia kwere nkwa ijeri kwuru ijeri dọla nkwado ụwa niile maka ngalaba a- ma na-emezu nkwa ahụ.
Ihe onye isi oche ndị njem nlegharị anya ụwa chere:
Juergen Steinmetz, onye isi oche Network Njem Nleta Ụwa na usu-ndi-agha nke Jehova iwughachi njem mkparịta ụka kwuru, sị:
"Njem nlegharị anya ụwa chọrọ enyemaka, Saudi Arabia na -azaghachi. "
Steinmetz, onye bụkwa onye mbipụta akwụkwọ nke eTurboNews Ọ gbakwụnyere, "WTN malitere n'oge na -adịbeghị anya Otu mmasị Saudi Arabia n'okpuru nduzi nke Onye isi ala ya bụ Dr. Abdulaziz Bin Nasser Al-Saud.
”Ọ bụghị n'ezie ka ọ pụta ìhè inye ike nke njem njem otu mba. Ọ bụ maka iso ndị na -eme ihe na -arụ ọrụ ọ bụghị naanị ndị na -eso ụzọ na ndị na -ekwu okwu. Saudi Arabia bụ onye na -eme ihe ma gosipụta ọtụtụ ndị ndu na njem njem na njem njem n'oge nsogbu a karịa ọtụtụ mba ndị ọzọ jikọtara ọnụ.
“Saudi Arabia na -etinye ego ya n'azụ nkwa. Ahụghị m ihe ọjọọ ebe a. Njem nleta ga -anọgide bụrụ ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ihe omume mpaghara. E kwuwerị, ọ na -abụkarị ụlọ ọrụ na -achọ ọdịmma onwe ya naanị ebe ebe asọmpi na -asọrịta mpi.
“Inwe etiti njem nlegharị anya n'otu ebe bụ nnukwu echiche. Ọ bụrụ na onye ọbịa maka ebe etiti ụwa a nwere ego iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ọ dị ka mmeri nye ụwa njem na njem.
“Inwe ebe etiti mba ụwa maka njem nlegharị anya apụtaghị na ụwa a na -ekepụta echiche zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ gọọmentị zuru ụwa ọnụ maka njem. Ọ nweghị ihe jikọrọ ya na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ọbịa. Echiche nke obodo agaghị enwe ike ime njem nlegharị anya ụwa. Dịka ọmụmaatụ United Nations abụghị ụlọ ọrụ US, n'agbanyeghị na akwadoro ya na United States. Ọ nwere ike bụrụ ụzọ ọzọ. N'ịchịkọta ụwa mba nwere ike ịmụta ihe, nabata ma mepee echiche na ọdịbendị ọhụrụ.
“Inwe isi ụlọ ọrụ na -eme njem nlegharị anya n'otu ebe agaghị agbanwe ụzọ njem nlegharị anya dị iche iche si arụ ọrụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ọ bụ obere ụwa ka emechara, Zoom gosipụtara anyị niile.
"Anyị kwesịrị ito Saudi Arabia maka ịza ọtụtụ oku 911. Obodo a na -abata ihe izizi maka ụlọ ọrụ anyị ma nwee akụrụngwa iji nyere aka. Saudi Arabia ka na -eji amara na amụmụ ọnụ ọchị na -aza. ”
Jane Folsom ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 05:53
Ndo Juergen, enweghị m mmasị ma ọ bụ kwenye na nke a bụ echiche amamihe. Kedu ihe kpatara Saudi Arabia ji amakụ mgbe ha ka na -enyeghị nsonaazụ iwu maka igbu ọchụ na ịbepụ onye otu ndị otu mkpesa Washington Post..Jamal Khashoggie? Kedu maka nkata ibibi ụlọ ọrụ azụmaahịa ụwa dị na NYC naanị afọ iri abụọ gara aga, nke achọpụtara n'ime alaeze… na kedu maka enweghị nkwanye ugwu omenala maka ikike ụmụ nwanyị?
Naanị n'ihi na obodo nwere ego-nke ahụ ọ dabara na ịdị mma? China nwekwara nnukwu ego-gịnị kpatara na ndị ndu anaghị agba ha akwụkwọ?